Iimpazamo ezili-10 eziphambili zeMarijuana kunye ne-CBD ezenziwa ngokusebenza kweinjini yokukhangela
Iimpazamo ezili-10 eziphezulu zokuzonwabisa zentsangu ezenziwa kunye newebhusayithi yazo.
Iimpazamo ezili-10 eziphezulu zokuzonwabisa ngenyawu ...
Andiqinisekisi ukuba indawo iyahamba ngokulula
Phantse iipesenti ezingama-75 zabo bonke abaphandi be-intanethi benziwa ngezixhobo eziphathwayo. Oku kuyinyani ngakumbi kumashishini aneedilesi ezibonakalayo kuba ixesha elininzi aba bathengi banokuhamba. UGoogle uluqale olu tshintsho ngo-2014 xa uqaphela ukuba ukukhangela okuselfowuni kuphelise ukukhangela kwidesktop okokuqala. UGoogle uya kwenza njalo PENALIZE indawo yakho ukuba ayihambelani. Ungayivavanya iwebhusayithi yakho ngoku ngekhonkco elinobuhlobo likaGoogle Apha: https://search.google.com/test/mobile-friendly
Ukungabinayo imveliso yemenyu yokubamba kwiwebhusayithi yabo.
Uninzi lwee-Marijuana zokuzonwabisa ezinamamenyu abo abanjwe kwiindawo zomntu wesithathu ezinje ngeLeafly okanye iiMephu zoKhula. Le mpazamo enkulu kwezi zizathu zilandelayo:
Iinjini zokukhangela zikaGoogle zikhetha iiwebhusayithi ezihlaziya umxholo wazo rhoqo. Okukhona indawo ihlaziywa rhoqo isiza esiya kuthi sifakwe isalathiso ngabakhasi bakaGoogle.
B.Umxholo nguKumkani, iwebhusayithi enomxholo ongaphezulu iya kuhlala ikwindawo ephezulu kunezo zinokuncinci.
C. Eyakho izinga lokuhlawula ingaphezulu kakhulu. Umgangatho wokuhlawula ligama le-SEO elilinganisela ukuba abasebenzisi bahlala ixesha elingakanani kwiwebhusayithi yakho. Ukuba uyiGoogle intsangu kwaye ikuzisa kwiwebhusayithi ethengisa iinxalenye zemoto ucofa kwangoko emva kwaye uqhubeke nokhangelo lwakho. UGoogle ujonge le metric njengophawu lokuba iwebhusayithi yakho ingogaxekile okanye umgangatho ophantsi. Abantu abafumana ulwazi abalufunayo bahlala ixesha elide kwindawo leyo kwaye bafunda ulwazi.
D. Ukuba imenyu yakho ayikho kubathengi bakho besiza abafuna iimveliso ezithile baya kuya kukhuphiswano lwakho endaweni yoko. Nanku umzekelo,
Abaphandi boMsebenzisi be Iphupha eliBlue kwiTacoma Nazi iziphumo.
Amashishini e-marijuana angenayo imenyu yawo kwiwebhusayithi yawo nANINI vela kolu khangelo lwasekhaya.
Ungenzi uphando lwamagama aphambili ngaphambi kokwakha isiza.
Ukuba awenzi uphando lwamagama aphambili eyinkqubo yokusebenzisa izixhobo ezithile ukumisela ukuba ngawaphi amagama aphambili abantu abawakhangela kakhulu uza kufumana ukugcwala okuncinci kunye nokuthengisa kunabo ukhuphisana nabo. Indlela elula yokwenza uphando lwegama elingundoqo kukuchwetheza kwigama lakho ekujolise kulo kuGoogle. Inkqubo ye- auto igqibile iingcebiso sisikhokelo esihle kuhlobo lwamagama abasebenzisi abawasebenzisayo ukufumana imveliso okanye iinkonzo. Ukuba iwebhusayithi yakho ayiqulathanga la magama aphambili kwisihloko, iinkcazo zeMeta kunye nomzimba wephepha lakho lewebhu ophoswa ngabathengi abaninzi.
Ibhlog yakho isebenza kwezi zinto zilandelayo:
Yongeza umxholo kwiwebhusayithi yakho. Unokongeza uphononongo lwemveliso, amabali, iminyhadala kunye nokunye.
B. Igcina iwebhusayithi yakho ihlaziywa ngomxholo omtsha oza kukunika amazinga aphezulu.
C. Uya kubamba amagama angumsila omde angama-75 epesenti yalo lonke uphando. Igama elifutshane lomsila eliyintloko liya kuba yinto efana ne "dispensaries kufutshane nam" igama elingumsila elide liza kuba "Yeyiphi eyona ndawo ilungileyo yokuhlaziya intsangu eSeattle". Khumbula ukuba iipesenti ezingama-25 zokukhangela ngosuku zizinto uGoogle angazange azibone ngaphambili. Ngokongeza ibhlog kunye nokuyigcina ihlaziywa ngomxholo omkhulu uya kubamba ngaphezulu kwaba bathengi.
Ikhamera yeVital X yangaphakathi / yangaphandle yeWIFI
I-199.99 iyathengiswa nge-119.00
Ukungalusebenzisi uluhlu lwakho lweshishini lukaGoogle kunye nePhepha likaGoogle-elidibanisa.
UGoogle uzama ukukhuphisana nezinye iisayithi zentlalo kunye nokuphononongwa njengencwadi yobuso kunye neYelp. Ngokugcwalisa uluhlu lwakho lweshishini lukaGoogle kunye nokongeza imifanekiso efanelekileyo uGoogle uya kuba nakho ukulithatha ngokungathí sina ishishini lakho kwaye alidwelise ngaphezulu. Ngokuhlaziya iphepha lakho likaGoogle kunye nokukhuthaza abathengi bakho ukuba balandele iphepha lakho. Iposti yakho iya kubonakala kwiziphumo zabo zokukhangela phantse ngephanyazo.
Akuthengiswanga ngeTyhubhu yakho
UGoogle yeyona injini yokukhangela inkulu emhlabeni, into abantu abaninzi abangayiqondiyo kukuba Wena-Tube yeyona injini yesibini yokukhangela inkulu ehlabathini. Kwaye ucinga ntoni? UGoogle ungumnikazi weTyhubhu yakho. UGoogle uyakuthandaIividiyo zeYou-Tube kuba banokuthengisa intengiso nanini na xa abasebenzisi bezijonga. Iya kuba sengqiqweni ke into yokuba ube neTyhubhu yeWebhu yeshishini lakho kunye namagama aphambili athunyelwe rhoqo kwiividiyo ezinxulumene neshishini lakho.
Hayi ukuqokelela ii-imeyile zabaxhasi
Indawo yakho yewebhusayithi ukusukela kusuku lokuqala kufuneka ube necandelo apho abathengi banokushiya khona igama labo kunye nedilesi ye-imeyile ukuze bajoyine uluhlu lwakho lokuposa. Ungalusebenzisa olu luhlu lokuposa ukwazisa ngeziganeko, izaphulelo kunye nokhuphiswano lweepeni kwidola.
Ayifuni abathengisi ukuba banxibelelane nendawo yakho.
Enye yeendlela ezibaluleke kakhulu uGoogle amisela amandla kwiwebhusayithi kukuba zingaphi ezinye iiwebhusayithi ezibonisa amakhonkco abuyela kuwe. Oku kubalwa njenge ivoti ye-intanethi ukuba iwebhusayithi yakho lishishini lokwenyani kwaye linomxholo olungileyo. Nangona kunjalo onke amakhonkco awalingani; ufuna amakhonkco kwiiwebhusayithi ezikumhlaba omnye weshishini okhoyo. Bangaphi abathengisi bakho abaneewebhusayithi? Bonke mababonise ikhonkco kweyakho indawo. Oku kuya kunceda BONKE Amashishini abeka intengiso ephezulu yokwanda kuni nobabini.
Ukungabinabo abasebenzi abazibandakanya nomxholo kunye nezabelo zentlalo.
Bangaphi abasebenzi bakho abaneFacebook-incwadi, i-twitter okanye iiakhawunti zikaGoogle? Ngaba bayathumela kwaye babelana ngeposi yakho? Ngaba bayazishiya izimvo kwiwebhusayithi yakho? Ngaba benza umxholo wesiko kunye nemibhalo malunga neshishini lakho? Ukuba azikho kufanelekile. Ukwabelana ngokwentlalontle kwishishini lakho kukuphakama kwiwebhusayithi yakho. Impumelelo yabo ixhomekeke kwimpumelelo yakho.
Funda isikhokelo sethu Iindlela ezi-8 zabasebenzi ezinokukunceda ukuphucula ukusebenza kweinjini yokukhangela.
Ayiphenduli kuhlolo lwakho lukaGoogle.
Ngokophando olwenziwe ngu Kwindawo I-88% yabathengi bathemba uphononongo lwe-Intanethi ngokungangqinelana nengcebiso yobuqu-nto leyo iyamangalisa xa ujonga inyani yokuba uphononongo luposwe ngabantu abangabaziyo. Uphando olufanayo olwenziwe nguBrightlocal; kumiselwe ukuba yi-12% kuphela yabemi engakhange ifunde uphononongo rhoqo lweenkonzo zeshishini okanye iimveliso. Uninzi lwabanini bamashishini abazi nokuba banokuphendula kuhlolo lwabo kwaye oko kuyinzuzo yakho ukuba uyisebenzisa ngokufanelekileyo. UGoogle ukhuthaza abanini bamashishini ukuba baphendule kuhlolo olulungileyo kwaye kubaluleke ngakumbi ukubuyekeza okungalunganga. Oku kubonisa uGoogle kunye noMthengi okhathalayo malunga negama lakho kwi-Intanethi. UGoogle ujonge oku njengophawu lokuba ishishini lakho lisemthethweni kwaye liya kukuphakamisa.
Yiya apha ufunde indlela yokuphendula kuhlolo lwakho lukaGoogle. https://support.google.com/business/answer/3474050?hl=en
Umzekelo wokuphendula kuVavanyo lwaBathengi
Ukusebenza kweNjini yokuKhangela kwezixhobo yenye yezona zinto zibalulekileyo onokuzenza ukuzisa abathengi abaninzi. Ukuba ishishini lakho alikho kwiphepha lokuqala likaGoogle abo bathengi baya kwabo ukhuphisana nabo.
Isenselogic.com Iphethwe nguDavid Meshach owayengunjineli wesiseko seMicrosoft kunye nomnini wezonyango. Siyazi ukuba kunzima kangakanani ukukhuphisana kwimarike yentsangu yolonwabo kunye nonyango. Ngokuqinisekisa ukuba iwebhusayithi yakho ayinazimpazamo kwaye ilungiselelwe ngokuchanekileyo uya kufumana ukhuphiswano lwakho.
Nxibelelana nathi namhlanje malunga ne UKUPHICOTHWA KWE-SEO KWASIMAHLA zewebhusayithi yakho yangoku okanye ukuphendula nayiphi na imibuzo onokuba nayo malunga newebhusayithi yakho.
Cofa apha Ukugcwalisa iFom yoQhakamshelwano
Udidi: BlogBy ikhodecafe Julayi 3, 2017 3 Comments
tags: Ukusetyenziswa kweeNjini zokuKhangelaIntsangu SEO
egqithileyongeposi Previous:Ngaba ihlawula malini iLeafly kunye neWedmaps kwintengiso ye2019?Okulandelayoelilandelayo:Iindlela ezi-8 abaqeshwa bakho abanokunceda ngazo ishishini lakho ukuba lifumane ingeniso ethe kratya nge-SEO
seo ukubonisana uthi:
Julayi 1, 2020 kwi-9: 06 pm
Ndiyonwabele le posti yebhlog! Ndivavanya indawo yakho yebhlog ngokufanelekileyo
Ngokwesiqhelo ngokuhlala ukhupha izinto ezoyikisayo.
Ndabelana ngale nto kuFacebook wam kwiindawo zokuzonwabisa ze-cannabis kwaye abalandeli bam bathande
yiyo! Gcina umsebenzi olungileyo 🙂
Julayi 2, 2020 kwi-2: 26 pm
Indlela yokufumana imali ngokusebenzisa iziyobisi zentsangu zokuzonwabisa usebenzisa i-injini yokukhangela
Emva kweentsuku ezingama-30 kuphela, kusafuneka ndizincinile ukuze ndiqiniseke ukuba andiphuphi.
Ndifumana amashumi amawaka eedola inyanga nenyanga ezindongeni zam ezine zokuphola.
Inzuzo iyakhula kwaye ikhule kwaye ikhule!
Ithatha kuphela imizuzu embalwa
Ngokucofa nje okumbalwa, unokwenza i-15,000 yeedola yonke imihla ubomi bakho bonke
Intuthuzelo yasemhlabeni ye-CBD uthi:
Agasti 8, 2020 kwi-12: 11 am
Inqaku elikhulu lokuyilwa kwewebhusayithi yokuhambisa kunye ne-SEO.
igama * email * website
ifom ecacileyoThumela izimvo